Multi ọrụ ọwa, Multifunctional tọọchị-FS-1001 - China Ksdoing Co., Ltd
Multi ọrụ ọwa, Multifunctional tọọchị-FS-1001
Ngwaahịa a bụ naanị tọọchị ị ga-izute. Ọ na-agwakọta niile na ọrụ nke omenala flashlights na ihe dị nnọọ NEW & AKPAN !! Ị ga hụrụ ya n'anya! 300 Lumen Chakwasa ihie (elu-strobe-ala) 6 ikanam Work Light, 6 ikanam UV / Black Light
GỊNỊ BỤ ngwaahịa?
Ngwaahịa a bụ naanị tọọchị ị ga-izute. Ọ na-agwakọta niile na ọrụ nke omenala flashlights na ihe dị nnọọ NEW & AKPAN !! Ị ga hụrụ ya n'anya!
300 Lumen Chakwasa ihie (elu-strobe-ala)
6 ikanam UV / Black Light
Red Lens Iyo
reusable egbukepụ egbukepụ Stick
Ekpuchi LEDs na reusable na-egbukepụ egbukepụ na-mkpisi. Sapeta LEDs on maka banyere 3 sekọnd. Ị dị nnọọ ebubo ndị na-egbukepụ egbukepụ mkpisi. Ugbu a iji na-egbukepụ egbukepụ osisi na ìhè gị na-azọpụta gị batrị.
Olee Nkepụ ọkụ okirikiri na ya?
Pịa ma jide "On" bọtịnụ ruo mgbe ọkụ itabi. Ngwaahịa na-arụ ọrụ ugbu a na ike ịzọpụta cycles. Ugbu a, i nwere ike ịnọgide na-enwe a na-egbukepụ egbukepụ osisi ìhè enweghị agwụ gị batrị.
Olee reusable egbukepụ egbukepụ arapara ọrụ?
Inside na reusable egbukepụ egbukepụ osisi na ibu kristal nke strontium aluminate. Nke a bụ na-egbuke egbuke, na kasị odori, na fọdụrụ n'ezinụlọ achasi na-egbukepụ egbukepụ na-na-na-na ọchịchịrị na ahịa. Chee echiche nke dị ka na-egbukepụ egbukepụ na ọchịchịrị kpakpando ị arapara na n'uko ma na Steroid.
Gịnị mere anyị na-egbukepụ egbukepụ na-na-na-na ọchịchịrị NKE Bright?
Omenala na-egbukepụ egbukepụ na-na-na-na ọchịchịrị na-abịa na a ntụ ntụ, na-eche nke ntụ ntụ dị ka ọtụtụ nde obere fom na banye ìhè na-ana. Ozugbo zuru ezu ebubo ọ bụla urughuru ewepụtarịrị a ala-larịị na-egbukepụ egbukepụ ruo mgbe ọ na-agba si nke ike. Nke a bụ ihe mere omenala na-egbukepụ egbukepụ na ọchịchịrị bụ na-egbuke egbuke n'ihi ahụ bụ otú obere ego nke ìhè na ha nwere ike ijide na emit bụ ntakiri. Ebe a ngwaahịa na-egbukepụ egbukepụ kristal bụ ibu, ha nnukwu urughuru size-enye ha ohere banye ọzọ ìhè na emit ọzọ ìhè n'ihi na ogologo. Ọ bụghị banyere ebe ọ bụ na kristal bụ otú nnukwu anya gị ga-aghọta na ha dị ka mma. Na ha dị ka nnukwu ìhè fom!
N'IHI gịnị UV LIGHT?
Agbanye a mgbe nile tọọchị na ọchịchịrị nwere ike ime gị abalị ọhụụ ma ọ bụ ise na-achọghị anya ọnọdụ gị, ya mere, anyị nyere a tọọchị a stealth ọrụ site gụnyere nwa ọkụ. Jiri nwa ọkụ ịzọpụta gị abalị ọhụụ ma ọ bụ nanị na-achọghị spook azụ gị azu njem. I nwekwara ike iji ngwaahịa chọta akpị, Pita stains, nche markings, na ndị ọzọ. Anyị adịghị eji red ìhè n'ihi na ọ gaghị na-ana anyị kristal.
N'IHI gịnị abụọ batrị mkpọ Nhọrọ?
Nke a tọọchị bụ ihe niile banyere mgbanwe na pụrụ ịdabere otú anyị na-àjà ọrụ abụọ dị iche iche batrị ngwugwu: 3 Aaa batrị (nhọrọ) na 1 USB rechargeable lithium ion batrị.
Kemwepu Uhie oghere nyo?
Jiri red oghere nyo nke a na-conveniently emi odude na ala gị tọọchị.
Previous: Multifunction egbukepụ egbukepụ mkpọrọhịhị
Next: Mini mgbanwe clip-on USB- FS-2003Ub
Na-agbanwe agbanwe Light & anọte Aka ọwa
mmiri Nkepụ ọkụ
Dual Chargebale Nkepụ ọkụ
Emergency Nkepụ ọkụ
Emergency Ngwá Ọrụ Nkepụ ọkụ
Emergency ọwa Light
Flash Dugara ọwa
na-egbu maramara Light
Nkepụ ọkụ ọwa
Flashlights Na ọwa
Hand emefu Dugara Nkepụ ọkụ
Handhheld Dugara Nkepụ ọkụ
High ihie Nkepụ ọkụ
High Ike Dugara ọwa
Mere mmiri ọwa
Dugara Nkepụ ọkụ
Dugara Nkepụ ọkụ ọwa
Dugara rechargeable Nkepụ ọkụ
Mere Strong Light Nkepụ ọkụ
Dugara ọwa Nkepụ ọkụ
Dugara ọwa Light Nkepụ ọkụ
Dugara ọwa rechargeable
Mini Nkepụ ọkụ
Kasị Ike Dugara Nkepụ ọkụ ọwa
Multi Function Car ọwa
Multi Function Flash Dugara ọwa
Multi Function Mere Nkepụ ọkụ
Multi Function Dugara ọwa
Multi Ọtọ Dugara Nkepụ ọkụ ọwa
Multi Purpose ọwa Light
Multi Ngwá Ọrụ Nkepụ ọkụ
Multi Ngwá Ọrụ Dugara ọwa Light
Multi Tools ọwa
Multi-Function Nkepụ ọkụ
Multifunction Camping na-ejegharị Nkepụ ọkụ
multifunction Nkepụ ọkụ
N'èzí Nkepụ ọkụ
N'èzí Multi Function ọwa
N'èzí Multifunctional ọwa
Portable machini rechargeable ọwa
Portable Nkepụ ọkụ
Portable Multi Function Nkepụ ọkụ
Portable USB Nkepụ ọkụ
Rechargable ọwa Light
rechargeable Dugara ọwa
rechargeable Multi nzube ọwa Light
Rechargeable ọwa Light Dugara Nkepụ ọkụ
rechargeable ọwa Light Price
Strong Light Nkepụ ọkụ
Tools Flash Dugara ọwa
ọwa Light Dugara Nkepụ ọkụ
USB rechargeable ọwa Light
UV Nkepụ ọkụ)
Waterproof Dugara ọwa rechargeable